Deeqda Masters ee Yurub 2022 2022
October 18, 2021 Eze Thaddaeus
Waxbarashada qalin -jabinta waa hal -abuur waxbarasho oo cusub, arag faahfaahinta sida loo codsado deeqdan waxbarasho ee sayidyada Yurub 2022.
Deeqaha -waxbarasho iyo fursadaha kale ee kaalmada maaliyadeed waxay ka caawiyaan ardayda inay iska bixiyaan culeyska waxbarashada, xaaladaha qaarkood, waxay dabooli kartaa waxbarashada ardayda sannad dhan. Gargaarkaan waxaa bixin kara iskuulada, hay'adaha sida ururada samafalka, dowladda, ardayda ka qalin jabisa, iyo aaladaha kale.
Caadi ahaan, deeqo waxbarasho ayaa la siiyaa deganeyaasha joogtada ah iyo muwaadiniinta waddan gaar ah si loogu dhiirrigeliyo inay tacliinta sare ka sii wataan dalkaas. Ma jiraan deeqo waxbarasho oo badan oo kafaala qaada ardayda si ay waxbarashadooda dibadda ugu sii wataan, waana sababta qoraalkani waxtar u leeyahay.
Educations.com, oo ah goob sanado badan ka shaqeyneysay sidii ardayda looga caawin lahaa inay wax ku bartaan dibedda waddan kasta iyo iskuulkii ay doorteen ayaa hadda bixiya kaalmo deeq waxbarasho oo ah € 5000. Madalkan, Educations.com wuxuu ujeedkiisu yahay dhiirrigelinta iyo xoojinta ardayda si ay u sahamiyaan damacyadooda, u safraan adduunka, una qaabeeyaan mustaqbalkooda iyagoo kaa caawinaya inaad hesho barnaamijka saxda ah ee jaamacadda saxda ah ee waddanka saxda ah.
Qaddarka deeqda waxbarasho ee € 5000 waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay ku sii wataan shahaadada mastarka jaamacadda Yurub. Macno malahan barnaamijka aad rabto inaad raacdo. Deeqdan waxbarasho waxaa la siin doonaa semester -ka dayrta 2022 -ka illaa qiimihiisu yahay € 5000 si ay kaaga caawiso daboolidda khidmadahaaga waxbaridda oo aad hal talaabo kuugu soo dhowaato xiisahaaga weyn ee xiga.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 16th May 2022 at 12:00 CEST
1 Shuruudaha Xaq u yeelashada
2 Taariikhaha Muhiimka ah
3 Shuruudaha Codsiga
Codsadayaasha danaynaya waa inay si taxaddar leh u maraan shuruudaha u -qalmitaanka ee looga baahan yahay inay codsadaan deeqdan waxbarasho.
Waa inaad codsatay (ama aad codsan doontaa) jaamacad ama dugsi sare oo ku yaal Yurub dhexdeeda (guji halkan si aad u aragto Su'aalaha La isweydiiyo ee liiska rasmiga ah ee dalalka Yurub).
Waa inaad dalbatay (ama aad codsan doontaa) shahaadada heerka labaad ee mastarka laga bilaabo simistarka dayrta 2022.
Barnaamijka shahaadada waa in lagu barto Yurub gudaheeda ama internetka iyada oo loo marayo barashada masaafada ee machadka Yurub.
Waa inaad buuxisaa shuruudaha gelitaanka jaamacadda ama dugsiga qalin -jabinta, oo ay ku jiraan:
Hayso shahaadada koowaad ee jaamacadda (bachelor)
Buuxi shuruudaha luqadda ee barnaamijka
Waa inaad haysataa ama u qalantaa inaad dalbato fiisada waxbarasho ee khuseeya (haddii ay khuseyso).
Waa inaad wax ku barataa dibedda waddan aadan ahayn muwaadin ama aad hadda ku nooshahay (haddaadan hadda wax ku baran dibadda).
Shuruudaha kale ee kaa dhigaya musharrax ku habboon waa:
Adduun weynaha oo daneeya dhaqamada kale
Dhiirigeliyey oo loo waxyooday in si togan loo beddelo adduunka
Achiever tacliin sare leh dhibco joogto ah oo heer sare ah si loo caddeeyo
Ku lug leh kooxaha manhajka ka baxsan iyo waxqabadyada
Waad ku faraxsan tahay inaad bilowdo xiisahaaga oo aad la wadaagto sheekadaada adduunka!
U fiirso taariikhaha muhiimka ah ee hoose
Codsiyada furan: 3 September 2021
Codsiyada u dhow: 16ka Meey 2022, 12:00 CEST
Gabagabadii la ogeysiiyay: 13-24 Juun 2022
Ku guuleystaha ayaa lagu dhawaaqay: 4-8 Luulyo 2022
Deeqdan waxbarasho ayaa la bixiyay: Dayrta 2022 simistarka
Waa tan sida aad u dalban karto deeqdan waxbarasho
Codsiga wuxuu ka kooban yahay:
Soo gudbinta maqaal gaaban (erayada 400-500) ee su'aasha: Maxaad u dooratay barashadaada dalka dibadiisa, sidee ayeyse kaaga caawin doontaa inaad ku koraan sidii hogaamiye maskax caalami ah?
Fadlan ogow, codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa Ingiriis. Codsiyada luqadaha kale lama tixgelin doono.
Haddii loo doorto kama -dambeyste, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad bixiso:
Caddaynta aqbalaadda jaamacadda qaab nuqul ka mid ah warqadda aqbalaaddaada
Caddeynta u qalmidda shahaadada koowaad ee jaamacadda nuqul ka mid ah qoraalkaaga
Caddaynta aqoonsiga oo ah nuqul baasaboorkaaga ah
Nuqullada dukumentiyada waa inay ahaadaan baaritaanno midab leh. Fadlan dokumentiyadaan gacanta ku hay haddii laguu doorto kama -dambeyste. Waxaad heli doontaa 7 maalmood laga bilaabo wakhtiga aad hesho ogeysiiska xulashada kama dambaysta ah si aad noogu soo gudbiso dokumentigan.
Haddii loo doorto inuu yahay guuleystaha, waa inaad:
Ka jawaab 3 maalmood gudahood markaad hesho deeqda waxbarasho si loo xaqiijiyo aqbalaadda
Si aad u bilowdo codsigaaga riix halkan
Lacagtan € 5000 ee ay bixiso Educations.com waxay ku dhiirigelin doontaa ardayda inay aadaan daraasaddaas dibedda ah ee ay weligoodba ku doonayeen inay ku sii wataan barnaamijka sayidkooda ee ay jecel yihiin jaamacadda ay jecel yihiin ee Yurub. Kani waa fursad kuu keeni doonta faa'iidooyin intaas ka badan marka aad bilowdo safarkan.
Deeqaha Yurub Deeqda Masters Deeq waxbarasho oo diblooma ah Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:15ka Dugsi Hoose Dhexe ee ugu Fiican Lagos Nigeria